मधेसी जनताको राष्ट्रवादप्रति शंका नगर्न नगरौंः राजेन्द्र महतो – हिमालयन ट्रिबुन
मधेसी जनताको राष्ट्रवादप्रति शंका नगर्न नगरौंः राजेन्द्र महतो
काठमाडौं । राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद राजेन्द्र महतोले मधेसी जनताको राष्ट्रवादप्रति शंका नगर्न आग्रह गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको शनिबारको बैठकमा संविधानको दोश्रो संशोधन विधेयकमाथिको दफाबार छलफलमा भाग लिँदै महतोले अनुहार हेरेर राष्ट्र«घाती र राष्ट्रवादीको धारण नबनाउन आग्रह गरेका हुन् ।
प्रत्येक मधेसी जनताले सेना भएर नेपाली सीमाको रक्षा गर्दे आएको भन्दै आफूहरुमाथि शंकाको दृष्टिले नहेर्न आग्रह गरे । राष्ट्रवादको सवालमा मधेसी जनतालाई पटक पटक अग्नि परीक्षा लिने गरिएको भन्दै महतोले आफूहरुको राष्ट्रवादप्रति औंलो उठाउने काम नगर्न चेतावनी दिए ।
उनले राष्ट्रघातीहरुको पर्दाफास गर्नुपर्ने र उनीहरुलाई टुँडिखेलमा झुण्ड्याउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘ एउटा कुरा देशवासी जान्न चाहन्छ अब फेरि यो देशमा राष्ट्रघाती हुने हो कि ? यो राष्ट्रघाती को को हो यो देशमा पहिचान गर्नुपर्यो । देश बेचुवाहरु को हो हो ? देश बेचुवाहरुको खोजी हुनुपर्यो । नेपाली जनताले त्यो पनि खोजिरहेको छ । कालापानी, लिपुलेक , लिम्पियाधुरा सहितको नेपालको नक्सा त थियो ५८ बर्ष पहिले । कुन देश बेचुवाले बेच्यो ? स्वेतपत्र खै जारी गरेको ? स्वेतपत्र जारी गर्नुपर्दैन ? टुँडिखेलमा राष्ट्रघातीलाई झुण्ड्याउनु पर्दैन ? ढाकछोप गर्ने ? २५ बर्ष अघि महाकाली सन्धि भएको थियो र यही संसदबाट पारित गराईएको थियो । त्यो महाकाली सन्धि कसरी भयो ? त्यसमै थियो नि कालापानी सन्धिमा लिपुलेक महाकाली र लिम्पियाधुराको । त्यो स्पष्ट भएको भए हाम्रो जमिन मिचिन्थ्यो र ? किन भएन ? यो संसदबाट पारित गराईएको थियो । कस्ले पारित गरायो ? कस्ले सम्झौता गर्यो ? म त सांसद थिईन । मैले त सुनेको छु । पार्टी पनि फोरेर पारित गराईयो । कस्तो राष्ट्रवादी काम गर्या हो ?’
परराष्ट्र मन्त्रालयले भन्यो-देहरादूनमा विद्यार्थी कुटपिटको घटनाप्रति सरकार गम्भीर छ
फ्रान्समा दोस्रो देशव्यापी लकडाउनको घोषणासँगै पेरिस छाड्नेको लर्को
थप तीन हजार ५१७ जनामा कोरोना संक्रमण, १६ जनाको मृत्यु
Oct 30, 2020 HT